Ga Africa? Gụnye Zambia
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmelite nke Njem njem » Ga Africa? Gụnye Zambia
Na-agbasa News Travel • omenala • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ kacha ọhụrụ na Zambia
Njem nlegharị anya na-abụ ụzọ akụnụba akụ na ụba dị mkpa maka Zambia, na-eke ọrụ, na-akpali akpali akụrụngwa yana ịba ụba ego ndị mba ọzọ
Na Radar gị?
N'ime nde mmadụ 53.3 na-eme njem nlegharị anya na-aga Africa na 2014 naanị 1.7 pasent gara Zambia. Ebumnuche nke nleta ahụ bụ azụmahịa (pasent 54) na naanị 25% na-ede akwụkwọ maka ezumike. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị ọbịa si Africa, e nwere ndị njem si Europe (9.5 pasent), Asia (7.7 pasent), America (5.3 percent), na Australia (1.3 percent).
Zambia nwere akụ nke ohere ịnweta njem gụnyere ogige ntụrụndụ mba iri na itoolu na Kafue nke kachasị ukwuu na nnukwu mma bụ Victoria Falls. Ndị ọbịa bịara n’ịchọ ịda ọdịda ahụ mana ha ekweghị ihu ọgbaghara ndọrọndọrọ ọchịchị n’akụkụ Zimbabwe, ahọrọla ịdọrọ uche ha gaa Zambia.
Njem nlegharị anya na - abụ ụzọ akụnụba akụ na ụba dị mkpa maka Zambia ebe ọ na - emepụta ọrụ, na - akpali mmepe ime obodo na mmepe yana mekwa ka ego mba ọzọ na - enweta.
Na mgbakwunye, ọ bụ ehi ego nye gọọmentị ma na-akwalite ọrụ aka mpaghara.
Dabere na onye isi ọrụ Stein Liyanda nke ZNTB, enweghị mmepe na Zambia pụtara na anụ ọhịa anọgidela dị iche iche ma baa ụba. “Ọ bụghị nanị na anyị nwere egwuregwu n'ụba kamakwa ihe karịrị ụdị 700 nke ụdị nnụnụ. A na-echekwa otu ụzọ n'ụzọ atọ nke mba ahụ dị ka ogige mba na njikwa egwuregwu (Institutional Investor-International Edition. May, 2003).
David Livingstone Safari Lodge na Spa (Onye otu: Hotels nke ;wa; aha Hotels & Lodges Group)
David Livingstone Safari Lodge & Spa dị na Osimiri Zambezi, n'ime Mosi-Oa-Tunya Park, na-abụghị nke Siloka Island, site na Victoria Falls na nso obodo Livingstone. Ihe onwunwe ahụ gụnyere ime ụlọ ọkọlọtọ 72 na ụlọ ndị isi 5 nwere ntụ oyi. Eachlọ nke ọ bụla nwere mbara ihu nkeonwe nwere echiche magburu onwe ya banyere Osimiri Zambezi. Ime ụlọ nkwarụ dị.
Ala ndị gbara Lodge ahụ na-eme ka ọnọdụ ahụ maa mma nke ukwuu ma oghere ọha na eze apụta dịka akụkụ nke ihe nkiri.
Llọ obibi ahụ na-enye ohere omume ma bụrụ ebe nzukọ yana ebe agbamakwụkwọ.
Kala Restaurant dị na Afro-Arabian fusion nri ma mepere emepe maka nri ụtụtụ, nri ehihie na nri abalị.
Thelọ nkwari akụ ahụ na-enwe ọdọ mmiri n'èzí na ohere ịdị mma, spa, na ebe a na-eme golf na nso nso. Enwere ike ịhazi ịya ụgbọ mmiri na ịsọgharị rafting.
Ọnọdụ okporo ụzọ Zambia pụrụ iche na ebe a na-aga. Vehiclesgbọ ala ndị ahụ na-aga n'akụkụ aka ekpe nke okporo ụzọ na ụgbọ ala ndị na-agba n'okporo ụzọ na-aga elekere. Ọ bụ iwu na-akwadoghị ịtụgharị aka ekpe na ọkụ uhie.
Ọtụtụ okporo ụzọ enweghị ubu ma ọ bụ ụzọ ndị na-amanye ndị ji ụkwụ na anụ ụlọ na-agba n'okporo ụzọ ehihie na abalị. Ọ bụ mmebi iwu okporo ụzọ ịkụnye onye na-agafe agafe mgbe ị na-anyafe na mmiri. Inye mkpuchi nke atọ bụ iwu, a ga-azụrịrị ya na mba ahụ. Mgbe ịkwụsị, ị ga-egosi ihe akaebe nke ịzụta.
A na-edozi okporo ụzọ ndị ahụ n'ụzọ dị mma; n'agbanyeghị, ọ dị mkpa ịrụzi ọtụtụ ụzọ nke abụọ. A na-atụ aro ụgbọ ala ụkwụ anọ n'oge udu mmiri (njedebe nke Ọktọba rue etiti Machị).
Enweghị ndị ọrụ mberede maka ndị ọkwọ ụgbọala merụrụ ahụ ma ọ bụ ndị tọrọ atọ. Ndị na-eme ọghọm ụgbọ ala na-enwe nsogbu izuru ohi site n'aka ndị na-eme ka ha ga-enyere gị aka. Ọ bụ ezie na akwadoro ekwentị (n'ezie ọ dị mkpa), akụkụ ụfọdụ nke mba ahụ enweghị ọrụ ekwentị; n’agbanyeghi, iji ekwenti n’ejighi aka na adighi aka gi mgbe inya ugboala megidere iwu ma o buru na ejide gi, o gha acha gi.
Ọ bụrụ na ndị uwe ojii kwụsị gị mgbe ị na-anya ụgbọ ala ma gwa gị ka ịkwụ ụgwọ nra, rịọ maka akwụkwọ azụmahịa gị ma ọ bụ ntụzi aka gị na ọdụ ndị uwe ojii kacha nso ebe ị nwere ike ịkwụ ụgwọ. -akwọ ụgbọala “N'okpuru nduzi?” A na-anwale ndị ọkwọ ụgbọ ala na Lusaka's University Teaching Hospital wee kpụga ha n'ụlọ ikpe.
Gafe ókè - isi
Mgbe ndị ọbịa gafere site na mba Africa gaa na nke ọzọ, a ga-agbaso usoro iwu gọọmentị. Ọ bụrụ n’inwere onye ndu na - eduga gị, ọ ga - ejikwa aka ya rụọ ọrụ ahụ gụnyere ịgụnye paspọtụ gị, visa na ịkwụ ụgwọ ego. Zọ kachasị mma iji mee ka usoro a dị ngwa bụ ịgbaso ntuziaka ndị ntuziaka gosipụtara. Achọla ihe kpatara ya ma ọ bụ ihe kpatara ya. Naanị soro ntuziaka.
Ọ dị mkpa ịnwe ego na ego mpaghara yana dollar America dịka ụfọdụ ndị ọrụ nchịkwa ókèala agaghị anabata ego nke mba ndị ọzọ na ọ ga-abụ na ha agaghị anabata kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ debit. O dicha ka enweghi iwu ma obu usoro iwu na-agafe. Yabụ, ụkpụrụ kachasị mma bụ isi okwu a, "Kwadebe maka nke kachasị njọ ma kpee ekpere maka nke kacha mma."
Jikere maka ogologo ahịrị nke gwongworo, ụgbọala na ịnyịnya ígwè na-eche ịgafe oke. Gafe ókèala Zambia bụ ụgbọ mmiri. A na-arụ akwa mmiri mana ọ nọ na ọkwa mmepe kemgbe ọtụtụ afọ. N'ihi na ụgbọ mmiri na-agafe ụgbọ mmiri emeela agadi, ọ nwere ike ịdị nwayọ nwayọ, ọ nwere ike ọ gaghị adị mma. Ọzọkwa, soro ntuziaka nke onye ndu njegharị, ma nabata ntuziaka ha: gaa mgbe ha gwara gị ka ịgagharị, nọdụ ebe ha gwara gị ka ịnọdụ. Ha anọwo na-arụ ọrụ ha ruo ọtụtụ afọ ma mara banyere usoro ndị na-arụ ọrụ iji mee ka usoro ahụ dị ngwa.
Ụgbọ mmiri Kazungula
Ndidi na Nri
Oge ụfọdụ, ọ bụrụ n ’ihu ọma dị gị ma nwee ezigbo onye ndu, ịga njem si n’otu mba gaa n’ọzọ ga-adị mfe. Agbanyeghị, ọ kachasị mma ịkwadebe n'uche maka ogologo njem na-ekpo ọkụ, wee bụrụ ihe ijuanya na -eju anya mgbe ahụhụ ahụ bụ n'efu.
Nwee nri nri mmiri. Usoro nwere ike ịdị ngwa ma dịkwa mfe, ma ọ bụ na ọ bụghị.
Lelee ihe gị ma lekwasị anya na ụgbọ ala gị na / ma ọ bụ onye ndu njem gị.
Mee ka akwukwo ederede gi di (ya bu, Paspọtụ, visa, ego).
Nwee obi ụtọ ma na-amụmụ ọnụ ọchị. Iro, iwe, nkụda mmụọ - zoo mmetụta uche niile ruo mgbe edere ederede na ị nweghị ikike nchịkwa paspọtụ na ịkwọ ụgbọala na mba ị na-aga.
Ihe ị ga-eme ọzọ
Ndị ọbịa nwere ike ịnụ ụtọ Zambia n'onwe ha ma ọ bụ otu ìgwè; Agbanyeghị, belụsọ na ị maara Africa nke ọma, ibiri ma rụọ ọrụ na mpaghara ahụ, mgbagwoju anya nke ọdịbendị nwere ike ime ka njem bụrụ ezigbo ahụmịhe ma ọ bụrụ na ịgaghị eso nduzi nke onye ọrụ njegharị ọkachamara. Ntụziaka m bụ ịkpọtụrụ Ross Kennedy na Africa Albida Tours, ya na ndị otu ya ga - enyere aka ịhazi atụmatụ gị wee mepụta ụzọ dị mma.